Kooxaha Manchester United iyo Arsenal oo aan xagaagan la saxiixan doonin Dayot Upamecano… (Maxay tahay sababtu?) – Gool FM
Kooxaha Manchester United iyo Arsenal oo aan xagaagan la saxiixan doonin Dayot Upamecano… (Maxay tahay sababtu?)
(Yurub) 09 Sebt 2020. Kooxaha Manchester United iyo Arsenal ayaa la soo warinayaa inaysay xagaagan la saxiixan doonin daafaca ay doon doonayeen ee Dayot Upamecano.
Tababaraha Kooxda RB Leipzig ee Julian Nagelsmann ayaa ka nixiyey kooxihii doonayey Dayot Upamecano kuna war geliyey inaysan xagaagan la saxiixan doonin xagaagan.
Macallin Julian Nagelsmann waxa uu xusay in Upamecano uusan meelna u socon xagaagan oo uu sii joogi doono RB Leipzig waxaana uu yiri: “Isagu <Upamecano> halkaan ayuu joogi doonaa xilli ciyaareed, waan hubaa arrintaas.
“Mustaqbalka anigu ma hubo waxa dhici doona, maadaama uu karti badan yahay.
“Kooxo badan ayaa doonaya inay iibsadaan, xilli ciyaareedka soo socda waxay noqon kartaa mid dhab ah inuu ka tagayo kooxda, laakiin xilli ciyaareedkan wuu sii joogayaa.”
Kooxda Manchester United iyo Arsenal ayaa labaduba si xoog leh loola xiriirinayey Dayot Upamecano, laakiin macallinka naadiga RB Leipzig ee Julian Nagelsmann ayaa ku wargeliyey in daafacan dhexe uusan meelna u socon xagaagan.